DAAWO VIDEO: Xildhibaan Dalxa oo shaaca ka qaaday Sirta ka dambeysa dagaalka Farmaajo iyo Axmed Madoobe! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Xildhibaan Dalxa oo shaaca ka qaaday Sirta ka dambeysa dagaalka...
DAAWO VIDEO: Xildhibaan Dalxa oo shaaca ka qaaday Sirta ka dambeysa dagaalka Farmaajo iyo Axmed Madoobe!
Muqdisho (Halqaran.com) – Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Khilaafka Kismaayo ka taagan aysan dan ugu Jirin Soomaaliya, Balse ay Faa’iido ugu Jirto Dawladda Kenya.
‘‘Ma taagna Farmaajo iyo Axmed Madoobe, Ma taagna Jubbaland iyo DF-Soomaaliya, Maanta waxay taagan tahay Soomaaliya iyo Kenya, Waxa ay Maslaxadu ugu Jirto dhibaatada iyo in Soomaali isku Jabto waa Kenyaan, Dhibaatada dad ku dhacda, Dad kale ayay Faa’iido u tahay”. Ayuu yiri Prof. Dalxa.
Wuxuu kaloo hadalkiisa raaciyay Xildhibaan Dalxa, ‚‘‘Dadka halkaasi dhib ku soo gaarayo, kuwa Barakacaya, ku lagu dul dagaalamayo, waa Soomaali, Balse kuwa ka Faa’iidaya waa Cadowga Kenya oo doonaya dhulkuu haystay inuu sii Balaadhsado”.
dagaalka Somaliya iyo Kenya